जसलाई न परिवारमोह छ, न त भयो सन्तानमोह। छ त केवल देश र जनतामोह। हो, डा गोविन्द केसी त्यस्ता महापुरुष हुन् जो देश र जनताका भलाइका निम्ति आफ्नो जीवन सुम्पिन तयार छन्।
१५ पटकसम्म राष्ट्रका निम्ति जीवनदान गर्न तत्पर यी महापुरुषलाई किन बारम्बार तड्पाइरहनुहुन्छ महोदय? आफ्नो जीवन जसलाई पनि प्यारो हुन्छ, चाहे त्यो भिकारी होस्, भिक्षु होस्, धनाढ्य होस् या महात्मा नै किन नहोस् । यसरी देश र जनताका निम्ति आफ्नो जीवन वलिदान गर्न खोज्ने महापुरुषलाई बेवास्ता गरिरहँदा भलो कसको हुन्छ?
डा केसीको माग काठमाडौंमा थप मेडिकल कलेज खोल्नै दिनुहुन्न भन्ने पटक्कै होइन, उहाँको भनाइ त यदि अहिले नै राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज खोलियो भने दार्चुला, डोल्पा सोलुखोम्बुका जनतालाई न्याय हुँदैन भन्ने हो। उनीहरुको पीडा जस्ताको तस्तै रहनेछ भनेर हो । तसर्थ पहिला दुर्गम भेगका गरिब जनतालाई महसुस हुनेगरी मेडिकल कलेज खोलिनु पर्छ भन्ने उहाँको आशय हो । चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई ब्यापार मात्र नबनाइयोस् भन्ने उहाँले चाहाना राख्नु भन्दा पहिला सरकारले नै सोच्नुपर्ने हो । तर विडम्बना हाम्रा नेताहरुको उल्टो गति समातिरहेका छन्!
नेपाल चिकित्सक संघ डा. केसीको मागमा सुनुवाइ नहुँदा आन्दोलनमा उत्रेको अवस्था छ। संघको टोलीले सम्माननिय प्रधानमन्त्रीलाई भेटी ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो। आन्दोलनमा उत्रिए उल्टै चिकित्सकलाई कार्वाही हुने अभिव्यक्ति आएछ। सायद प्रधानमन्त्रलाई अवगत नहुन सक्छ, हतियारका कारण देशमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रहरी सेना हुन्छन्। तर, सेवाका हिसाबले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी पर्छन्। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रेको १ घन्टामै भयाभावक अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो दिन नअओस् र आएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ।
सानो स्वास्थ्य समस्या आउँदा आत्तिएर थाइल्यान्ड, सिंगापुर, दिल्ली पुग्ने हाम्रा नेतागणलाई १५ पटक स्वदेशमै ज्यानको बाजी लगाएका डा. केसीलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । देशका गरिब जनताका लागि लगाएको ज्यानको बाजीलार्इ बेवास्ता गर्ने छुट सरकारलार्इ हुँदैन।
अहिले डा केसीप्रतिको बेवास्ताले सरकारले उनको जीवनभोग लिन तयार रहेको जस्तो देखिन्छ । यदि वर्तमान शासकको नियत डा केसीको मृत्यु हो भने एकैपटक शूलीमा चढाऊ ! यसरी घोची–घोची नमार!
तर खबरदार ! एउटा गोविन्द केसीलाई शूलीमा चढाउँदा उनीसँगै शूली चढ्न तयार हुने लाखौं जनता छन्। शूलीमा चढाउन तयार हुने नेताज्यू, के तपार्इंहरुको मृत्युमा आँसु चुहाउने मान्छे भेटिएला?
डा भट्टरार्इ नेपाल चिकित्सक संघका परिषद् सदस्य हुन्।